DEG DEG: Wada hadaladii kasocday magaalada Muqdisho ee u dhaxeeya Madaxda DFS iyo D/Gobaleedyada ayaa u muuqda kuwa fashil qarka u saaran, Madaxda Jubbaland iyo Puntland ayaa ka baxay shirka oo socda, sida ay ii xaqiijiyeen saraakiil katirsan labada maamul.
Sunday April 04, 2021 - 16:52:04 in Wararka by Editor in Chief
Dooda adag ayaa dhexmartay Madaxda Jubbaland, PL oo isku dhinac ah iyo Galmudug iyo Hirshabeelle oo isku dhinac ah.
Saraakiil kudhaw labada dhinac, waxay sababaha kusheegeen in Qodobadii ay wateen ay noqdeen kuwa lagu raaci-waayay kalana ahaaa.
1. In madasha Musharaxiinta laga qeybgaliyo Shirka tooska ah.
2. Iyo In Baarlamaanka iyo Madaxtooyada la joojiyo shaqooyinkooda, laguna wareejiyo Awooda Xukuumad Xil-Gaarsiin oo laysku raacsan yahay.